MD Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo boob ku haya kuraasta Baarlamanka ee taallla Puntland - Allbanaadir
Home Warka Maanta MD Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo boob ku haya kuraasta Baarlamanka ee...
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa wada qorshe qarsoon oo uu ku boobayo kuraasta aqalka Sare (Senatarada) ee degaan-doorashadoodu tahay Puntland, waxana uu samaystay liis ay ku qoran yihiin dadka uu doonayo in baarlamanka Puntland u soo saaraan. Inkastoo uu jiro Khilaaf u dhexeeya Siciid Cabdullahi Deni iyo guddoomiyaha baarlamanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf JIbriil oo ku aaddan xubnaha senetarada ee reer Puntland, ayaa haddana waxaa Madaxweyne Deni iyo kooxda Aaaran-jaan ku adkaysanayaan sii wadista qorshahan ay ku soo saarayaan xubno ay iyagu dabada ka riixayaan. Sidoo kale, shir ay dhowaan Nairobi ku yeesheen Siciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweynaha Jubaland ayaa la iskula soo qaaday liisaska xubnaha uu Siciid Deni doonayo in loo soo saaro.
Wejiga kowaad ee boobka doorashada waxay ka bilaabanaysaa xubnaha aqalka sare, waxana Siciid Cabdullahi Deni oo ah Murashax Madaxeeyne ee DFS ayaa doonaya in uu gacanta ku dhigo 19-ka xubnood ee ka kala imanaya Puntland iyo Jubaland.
Xubnahaan 19-ka ah iyo qaar kale oo mucaaradku ka soo saarayaan maamulada kale ee dalka ayey sidoo kale ku doonayaan inay ku wada raadiyaan guddoonka aqalka sare iyo xoojinta tartankiisa Vill Somalia.
Xubnaha aqalka sare ee baarlamanka ee Siciid Cabdullahi Deni doonayo inuu soo saaro ayaa sidoo kale saamayn doonta doorashada baarlamanka aqalka hoose marka la eego awood-qaybsiga baarlamanka ee beelaha. Tusaale ahaan wuxuu samaynayaa in siyaasiga uu doonayo in uu baarlamanka ka reebo uu xubin ay isku beel hoose yihiin ka dhigayo senator, waxana halkaa ka baxaya damaca siyaasiyiin doonaya aqalka hoose maadaama haddii beeshu senator hesho ay ku adkaanayso inay ku darsato xildhibaanka aqalka hoose.
Isimada iyo odayaasha dhaqanka ee reer Puntland ayaa iyaguna wada soo-gudbinta dadka ay u rabaan in ay ku tartamaan doorashada aqalka sare, laakiin taasi waxay ka hor imanaysaa damaca Siciid Cabdullahi Deni iyo kooxda Aaaran-jaan waxaana suuragal ah in Deni uu iskiis baarlamanka ugu gudbiyo dadka uu isagu ku kalsoon yahay ee rabo inay ku soo baxaan doorashada. Xubnaha uu Siciid Cabdullahi Deni doonayo inay ku soo baxaan aqalka sare waxaa loo diyaariyey xubnihii la tartami lahaa ee qaab malxiis ahaan hoolka ula geli lahaa, iyaadoo laga bixinayo lacagaha tartanka ee labaatanka kun.
Qorshahan uu Siciid Cabdullahi Deni doonayo in uu xildhibaanno kaga soo saarto maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa waxaa ka dhalan kara buuq badan iyo dhaleecayn ka imanaysa beelaha kuraasta leh iyo weliba daneeyayaasha doorashada Soomaaliya. Dabcan dhibkasta ee ka yimaada waxaa mas’uuliyadeeda leh MD Puntland Saciid Cabdullahi Deni.
Haddii uu ku adkaysto boobka Xildhibaanada waxaa sharci daro noqonaysa inuu u istaago kursiga ugu sareeya dalka ee ah madaxweynaha DFS.